Horudhac: Atletico Madrid vs Barcelona… (Luis Suarez oo taariikh u dhigi kara horyaalka La Liga xilli uu wajihi doono kooxdiisii hore) – Gool FM
Horudhac: Atletico Madrid vs Barcelona… (Luis Suarez oo taariikh u dhigi kara horyaalka La Liga xilli uu wajihi doono kooxdiisii hore)
Ahmed Nur October 2, 2021
(Madrid) 02 Oct 2021. Kooxda kubadda cagta Atletico Madrid ayaa caawa garoonkeeda kusoo dhoweyneysa naadiga Barcelona kulan ciyaareed ka tirsan horyaalka La Liga.
Labada naadi ayaa qaab ciyaareed ka hooseeya kii xilli ciyaareedkii hore ku bilawday fasalkan inkastoo ay Barca xaaladdeeda kasii yara liidato tan dhiggeeda maadaama ay booska toddobaad ee kala sarreynta horyaalka dalka Spain ay la fadhiso 12 dhibcood halka kooxda Caasimadda Spain ka dhisan ay 14 dhibcood kula jirto kaalinta afaraad.
Garoonka:Estadio Wanda Metropolitano
Naadiga Atletico Madrid ayaa weyneysa saxiixiieeda cusub ee Matheus Cunha kaasoo dhaawac ka qaba bowdada, waxaase dib ugu soo laabanaya Koke oo dhaawac kasoo laabtay iyo Joao Felix oo soo dhammeystay ganaax kulammada horyaalka ah.
Dhinaca kale, Barcelona ayaa dib u heshay difaaceeda bidix ee Jordi Alba kaasoo kasoo laabtay dhaawac muruqa cajarka ah, waxaase mar kale la weyn doonaa Pedri kaasoo diiwaanka dhaawacyada kula biiray Sergio Aguero, Ousmane Dembele, Martin Braithwaite iyo Alejandro Balde.
>- Atletico Madrid ayaanan la kulmin wax guuldarro ah dhammaan saddexdii ciyaarood ee ugu dambeysay La Liga oo ay Barcelona la ciyaartay iyadoo hal guul gaartay labada kalena barbarro heshay.
>- Barcelona ayaa guuldarro la’aan ah lixdeedii kulan ee La Liga xilli ciyaareedkan iyadoo heshay saddex guul iyo saddex barbarro – markii ugu dambeysay ee ay guuldarro la’aan ahaatay lixda kulan ee ugu horreysa horyaalka waxay ahayd fasalkii 2017/18.
>- Macallinka Barca ee Ronald Koeman ayaanan guul ka gaaray labadii jeer ee uu Diego Simeone ku wajahay La Liga isagoo hal mar barbarro la galay marka kalena la garaacay.
>- Luis Suarez ayaa gool ka dhaliyay 30 ka mid ah 31 naadi oo uu ku wajahay La Liga isagoo wadar ahaan shabaqa gaarsiiyay 171 gool, waxaase kaliya uu ku hungoway inuu gool ka dhaliyo Barcelona.
Horudhac: Brighton & Hove Albion vs Arsenal... (Miyuu Danny Welbeck wajihi doonaa kooxdiisii hore + Rikoorka Aubameyang uu ka heysto Brighton)
Muxuu ka yiri Deschamps wararka Benzema la xiriirinaya inuu ku guuleysan karo Ballon d’Or?